Nezvedu | Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd.
Mvura Mwaya Kudzosera
Kunyudza Mvura Kudzosera
Kutungamira Steam Kudzokorora
Chiutsi & Mhepo Kudzosera
Mvura Mwaya Uye Rotary Kudzosera
Kunyudzwa Kwemvura Uye Rotary Retort
Steam Uye Rotary Kudzokorora
Vertical Crateless Retort Sisitimu
Zvoga Batch Retort System
Kuenderera mberi Hydrostatic Sterilizer
Dzosera Tray Base
Yakapetwa Rukara tireyi
Mbeu dzakauchikwa rukoko Pad
Dzosera Simba Kudzoreredza
Ratidza Iyo Simba
UNOGONESESA PAKUDZIVISIRA • TARISA PAMUSORO-PAMUSORO
DTS yakavakirwa muChina, iyo yakatangira yakatangwa mu2001. DTS ndeimwe yevanonyanya kukurudzira vatengesi vechikafu uye chinwiwa indasitiri yekugadzira indasitiri muAsia.
Muna 2010, kambani yakashandura zita rayo kuva DTS. Iyo kambani inovhara nzvimbo inosvika 1,7 mamirioni emamirimita uye, dzimbahwe riri muZhucheng, Shandong dunhu, ine vashandi zana nemakumi matanhatu. DTS ibhizimusi repamusoro-soro rinobatanidza mbichana mbichana, chigadzirwa R & D, dhizaini dhizaini, kugadzira uye kugadzira, kupedzisa chigadzirwa kuongorora, kutakura kweinjiniya uye basa rekushambadzira.
Iyo kambani ine CE, EAC, ASME, DOSH, MOM, KEA, SABER, CRN, CSA uye nedzimwe nyika dzehunyanzvi chitupa. Zvigadzirwa zvave zvakatengeswa kune nyika dzinopfuura makumi matatu nematunhu, uye DTS ine vamiririri nehofisi yekutengesa muIndonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Arabia, Myanmar, Vietnam, Syria nezvimwe .. Nezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakakwana mushure mekutengesa sevhisi. , DTS yakahwina kuvimba kwevatengi uye inochengetedza hukama hwakatsiga hwekugovera uye kudiwa neanopfuura zana nemakumi matatu anozivikanwa marondedzero epamba nekunze.
Dhizaini Uye Kugadzira
Kuti uve chinzvimbo chinotungamira mune yepasirese chikafu uye chinwiwa sterilization indasitiri ndicho chinangwa chevanhu veDTS, isu takawana ruzivo uye vanokwanisa mainjiniya ekugadzira, mainjiniya ekugadzira uye mainjiniya ekugadzira software, ndicho chinangwa chedu nebasa rekupa vatengi vedu zvigadzirwa zvakanaka. , masevhisi nenzvimbo yekushanda. Tinoda zvatinoita, uye tinoziva kuti kukosha kwedu kuri mukubatsira vatengi vedu kugadzira kukosha. Kusangana nezvinodiwa nevatengi vakasiyana, isu tinoramba tichivandudza, kukudziridza nekugadzira zvinogadziriswa zvinogadziriswa zvinogadziriswa zvevatengi.
Isu tine timu yehunyanzvi inotungamirwa neyakajairwa chitendero uye tichigara tichidzidza nekuvandudza. Chikwata chedu chakafuma chakaunganidzwa ruzivo, kungwarira kushanda maitiro uye mweya wakanakisa kukunda kuvimba kwevatengi vazhinji, uye zvakare mhedzisiro yevatungamiriri vanogona kunzwisisa, kufanotaura, kutyaira musika kudiwa nezvirongwa uye kushanda pamwe nechikwata kutungamira mukati utsanzi.
Sevhisi Uye Kutsigira
DTS yakazvipira kupa vatengi neyakanakisa michina yemhando yepamusoro, tinoziva kuti pasina yakanaka tsigiro rutsigiro, kunyangwe dambudziko diki rinogona kukonzera izere otomatiki yekugadzira tambo kumira kumhanya. Naizvozvo, isu tinogona kukurumidza kupindura uye kugadzirisa matambudziko kana tichipa vatengi ne pre-kutengesa, kutengesa uye mushure-kutengesa masevhisi. Ichi ndicho chikonzero nei DTS inogona kutora zvakasimba chikamu chikuru chemusika muChina uye ichienderera mberi ichikura.
Ndokumbirawo unzwe wakasununguka kutumira isu zvaunoda uye isu tinokupindura kwauri asap.
Tine nyanzvi yeinjiniya yeboka yekushandira yako zvako zvingangoita zvese zvinodiwa.
Sampuli dzisingabhadhari dzinogona kutumirwa kuti iwe pachako unzwisise rumwe ruzivo rwakawanda.
Mukuyedza kuzadzisa zvido zvako, ndapota inzwa wakasununguka kutaura nesu.
Iwe unogona kutitumira isu maemail uye utaure nesu zvakananga.
Zvakare, tinogamuchira kushanyirwa kufekitori yedu kubva kutenderera pasirese kuti tinzwisise zviri nani sangano redu.
Isu tinoteerera kune mutengi 1st, yepamusoro mhando 1, kuenderera kuvandudza, kuwirirana mukana uye kuhwina-kuhwina misimboti. Kana tikabatana pamwe nemutengi, isu tinopa vatengi neepamusoro soro sevhisi.
Kero: dts maindasitiri nzvimbo, zhucheng, shandong province, pr china
Runhare: +86 536-6549353